စူပါဆန်းဒေး ဘောလုံးပွဲစဉ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စူပါဆန်းဒေး ဘောလုံးပွဲစဉ်များ
Posted by မောင် ပေ on Mar 25, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games | 10 comments
မနေ့ ည က ကျွန်တော်ပို့ စ်မှာ ခန့် မှန်းခဲ့တဲ့ အေစီမီလန် နဲ့ မန်စီးတီး မှာ ၊ အေစီမီလန် က ရိုးမား ကို ဦးဆောင်ဂိုးပေးလိုက်ရပေမယ့် ၊ အရှုံးကနေ ပြန်ရုံးထွက်နိုင်ကာ ၂-၁ နဲ့ နိုင်ခဲ့ပြီး ၊ ၄၀ ခန့် အမြတ်ပေးသွားပါတယ် ။ မန်စီးတီး ကတော့ စုတ်ပြတ်စွာနဲ့ ဘဲ သရေဘဲ ကန်သွားပါတယ် ။ ချဲဆီးနည်းပြဟောင်း ဘိုအာ့ နောက်ကို မန်စီးတီးနည်းပြ မန်စီနီ လိုက်ရတော့မယ် လို့ ကျွန်တော် ထင်မိပါတယ် ။ သည်ကနေ့ တနင်္ဂနွေညမှာ ကန်ကြမယ့် ပွဲများထဲမှ အားပေးသူများကို အကျိုးရှိစေနိုင်မယ့် ပွဲတွေအကြောင်း ကို ပြောပြချင်ပါတယ် ။
9.30 ဝက်ဘရွန်း(၁၄) – နယူးကာဆယ်(၆)
8.00 စတုဂတ်(၉) – နုရင်ဘတ်(၁၁)
10.00 ကိုလုံး(၁၃) – ဒေါ့မွန်(၁)
5.00 အက်တလန်တာ(၁၂) – ဘိုလော့နာ(၉)
7.30 စီဆီနာ(၂၀) – ပါးမား(၁၇)
7.30 ချီယေဗို(၁၁) – ဆီနာ(၁၅)
7.30 ဂျီနိုအာ(၁၄) – ဖီအိုရင်တီးနား(၁၆)
7.30 လာဇီယို(၄) – ကယ်ဂလီယာရီ(၁၃)
7.30 နာပိုလီ(၅) – ကာတားနီးယား(၈)
7.30 နိုဗာရာ(၉) – လက်ချီ(၁၈)
1.15 ဂျူဗင်တပ်(၂) – အင်တာမီလန်(၇)
4.30 ဇာရာဂိုဇာ(၂၀) – အသလက်တီကို(၈)
8.30 လီဗန်တေး(၄) – အိုစာစူနာ(၇)
8.30 အက်စ်ပန်ညို(၆) – မာလာဂါ(၈)
10.30 ဘီဘာအို(၁၀) – ဂီဂျွန်(၁၉)
12.15 ဗယ်လကာနို(၁၁) – ဗီလာရီးရဲ(၁၇)
12.15 ဘက်တစ်(၁၅) – ရေဆင်း(၁၈)
ဇာရာဂိုဇာ(၂၀) – အသလက်တီကို(၈)
ဇာရာဂိုဇာ လာလီဂါ၂၈ပွဲကန်အပြီး ၅ နိုင် ၊ ၇ သရေ ၊ ၁၆ ရှုံး ၊ ရဂိုး၂၄ ပေးဂိုး၅၁ ၂၂မှတ်
အသလက်တီကို လာလီဂါ၂၈ပွဲကန်အပြီး ၁၀ နိုင် ၊ ၉ သရေ ၊ ၉ ရှုံး ၊ ရဂိုး၃၉ ပေးဂိုး၃၄ ၃၉မှတ်
ဇာရာဂိုဇာ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ငါးပွဲမှာ
နိုင် ၊ သရေ ၊ ရှုံး ၊ နိုင် ၊ ရှုံး
21.3.2012 ဗလင်စီယာ ၁-၂ ဇာရာဂိုဇာ
17.3.2012 ဇာရာဂိုဇာ ၁-၁ အိုစာစူနာ
10.3.2012 ဆိုစီဒက် ၃-၀ ဇာရာဂိုဇာ
4.3.2012 ဇာရာဂိုဇာ ၂-၁ ဗီလာရီးရဲ
25.2.2012 မာလာဂါ ၅-၁ ဇာရာဂိုဇာ
အသလက်တီကို အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ငါးပွဲမှာ
နိုင် ၊ ရှုံး ၊ နိုင် ၊ နိုင် ၊ နိုင်
21.3.2012 အသလက်တီကို ၂-၁ ဘီဘာအို
18.3.2012 မာယော့ကာ ၂-၁ အသလက်တီကို
15.3.2012 ဘီစစ်တပ် ၀-၃ အသလက်တီကို (ယူရိုပါလိဂ်)
11.3.2012 အသလက်တီကို ၂-၀ ဂရာနာဒါ
8.3.2012 အသလက်တီကို ၃-၁ ဘီစစ်တပ် (ယူရိုပါလိဂ်)
Oct 30, 2011 Atletico Madrid3– Zaragoza 1
Feb 19, 2011 Zaragoza0– Atletico Madrid 1
Sep 26, 2010 Atletico Madrid 1 – Zaragoza 0
Mar 7, 2010 Zaragoza 1 – Atletico Madrid 1
Oct 3, 2009 Atletico Madrid2– Zaragoza 1
ဇာရာဂိုဇာ ဟာ အမှတ်ပေးဇယားအောက်ဆုံးမှာ ရောက်နေတာမို့ ပွဲတိုင်း ကို အနိုင်ရအောင် ကြိုးစားနေတာကို တွေ့ ရပါတယ် ။
အသလက်တီကို ကလဲ တိုက်စစ်မှူး ဖယ်ကာအို ရဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ဂိုးသွင်းခြေ နဲ့ အတူ ယူရိုပါလိဂ် နဲ့ လာလီဂါမှာ ရလဒ်တွေ ဆက်တိုက် ကောင်းနေပါတယ် ။
ဈေးအနေအထားအရ အသလက်တီကို ၁ဂိုးသွင်းရင် ၅၀ အနိုင် ကို ၃၀(သို့ )၄၀ အနိုင် ဖွင့်လာနိုင်ပါတယ် ။ ( အသလက်တီကို ပွဲမှာ အစောပွဲဖြစ်သဖြင့် ၊ သည်ဘက်ဈေးကို မသိရသေးပါသဖြင့် )
ဂိုးဈေးကတော့ ၂ဂိုး ကို ၈၀ အရှုံး ဖွင့်လာနိုင်ပါတယ် ။
ဂိုးဈေး နဲ့ ဘော်ဒီဈေး ကို ယှဉ်ကြည့်ရင် လွဲချော်နေတာ ကို သတိပြုမိပါတယ် ။
တစ်ဂိုး ၅၀ အနိုင် ဘော်ဒီဈေးမျိုး ဖွင့်တဲ့ပွဲမှာ ဂိုးဈေးဟာ သုံးဂိုး + ဖြစ်ရမှာပါ ။
ဇာရာဂိုဇာ ရဲ့ တန်းဆင်းဇုန်ရုန်းအား ကို အသိအမှတ်ပြုချင်ပေမယ့် ၊ အသလက်တီကို က လဲ ၊ အဆင့် ၄၊၅၊၆၊၇ နေရာ က အသင်းတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ ဆုံနေကြချိန်မှာ ၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ အတွက် ၊ ဇာရာဂိုဇာ လို အသင်းသေးမျိုးနဲ့ တွေ့ ဆုံချိန်မှာ အနိုင်သေချာအောင် ကန်ရမှာပါ ။
ဇာရာဂိုဇာ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးညမှာ ဗလင်စီယာ လို အသင်းကြီးမျိုးကို ဗလင်စီယာ ရဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ၂-၁ နဲ့ နိုင်ခဲ့တာ ဆိုတော့ သည်ပွဲမှာ ပြန်ကျဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ် ။
“““ အသလက်တီကို ””” ကို အားပေးရင် အမြတ်ရဖို့ ၈၀%သေချာပါတယ် ။
ဂိုးအနဲအများ ရွေးရရင်တော့ ““ ဂိုးအနဲ ”” အောင်ဖို့ ၈၀% သေချာနေပါတယ် ။
လာဇီယို(၄) – ကယ်ဂလီယာရီ(၁၃)
လာဇီယို စီးရီးအေ၂၈ပွဲကန်အပြီး ၁၄ နိုင် ၊ ၆ သရေ ၊ ၈ ရှုံး ၊ ရဂိုး၄၂ ပေးဂိုး၃၄ ၄၈မှတ်
ကယ်ဂလီယာရီ စီးရီးအေ၂၈ပွဲကန်အပြီး ၈ နိုင် ၊ ၁၀ သရေ ၊ ၁၀ ရှုံး ၊ ရဂိုး၂၉ ပေးဂိုး၃၅ ၃၄မှတ်
ရှုံး ၊ ရှုံး ၊ နိုင် ၊ နိုင် ၊ ရှုံး
ကာတားနီးယား ၁-၀ လာဇီယို
လာဇီယို ၁-၃ ဘိုလော့နာ
ရိုးမား ၁-၂ လာဇီယို
လာဇီယို ၁-၀ ဖီအိုရင်တီးနား
အသလက်တီကို ၁-၀ လာဇီယို (ယူရိုပါလိဂ်)
ကယ်ဂလီယာရီ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ငါးပွဲမှာ
နိုင် ၊ ရှုံး ၊ ရှုံး ၊ ရှုံး ၊ သရေ
ကယ်ဂလီယာရီ ၃-၀ စီဆီနာ
နာပိုလီ ၆-၃ ကယ်ဂလီယာရီ
စီနာ ၃-၀ ကယ်ဂလီယာရီ
ကယ်ဂလီယာရီ ၁-၂ လက်ချီ
အူဒီနီး ၀-၀ ကယ်ဂလီယာရီ
Oct 30, 2011 Cagliari0– Lazio 3
Feb 27, 2011 Cagliari 1 – Lazio 0
Oct 24, 2010 Lazio2– Cagliari 1
Mar 21, 2010 Cagliari0– Lazio 2
Oct 28, 2009 Lazio0– Cagliari 1
သည်နေ့ ည သည်နှစ်သင်းတွေ့ ဆုံမှုမှာ ဈေးအနေအထားမှားနေတာကို တွေ့ ရပါတယ် ။
လာဇီယို သရေဆိုရင် အပြည့်ရှုံး ကို လာဇီယို တစ်ဂိုး ၆၀ အနိုင် ဖွင့်လာပါတယ် ။
ဒါဟာ ကယ်ဂလီယာရီ ဘက် ကို နေစေချင်တဲ့ သဘောပါဘဲ ။
လာဇီယို အနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ချင်ရင်သည်ပွဲကစလို့ ကျန်တဲ့ပွဲတိုင်း ကို အနိုင်ကန်ရပါတော့မယ် ။
ကယ်ဂလီယာရီ ရဲ့ အနေအထားကတော့ အပေါ်မရောက် အောက်မရောက် အသင်းပါ ။
လာဇီယိုဟာ ရှေ့ နှစ်ပွဲ ဆက်တိုက် ရှုံးခဲ့တာရယ် ၊ သည်ပွဲမှာ ကာလာမလှ ရင် အောက်က တစ်မှတ်ကွာ နာပိုလီ ကို နေရာဖယ်ပေးရနိုင်တာရယ် နဲ့ ၊ သည်ပွဲ ကို သေချာပေါက် အနိုင်ကန်မယ် လို့ ယူဆမိပါတယ် ။ ကယ်ဂလီယာရီ ရဲ့ နောက်တန်းဟာ လဲ ပွင့်ထွက်နေပါတယ် ။ ပေးဂိုးများနေပါတယ် ။
““ လာဇီယို ”” ကို အားပေးရင် စိတ်ချမ်းသာရမှာ သေချာပါတယ် ။
……. အားလုံး အောင်မြင်ပါစေ …….
အသလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကတော့ ပွဲအပြီးမှာ ဇာရာဂိုဇာ ကို ၁-၀ နဲ့ ရှုံးသွားခဲ့ပါပြီ ။
ကျွန်တော့် ဘောလုံးကို ပို့ စ် ကို ဖတ်ကြတဲ့ အားပေးသူများအတွက် ၊ ဒီည ထပ်မံ တွေ့ ရှိတဲ့ နှစ်သင်း က တော့
ချီယေဗို နဲ့ ရင်ဆိုင်မယ့် ““ ဆီနာ ”” နဲ့ 
လီဗန်တေး နဲ့ ရင်ဆိုင်မယ့် ““ အိုစာစူနာ ”” တို့ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
““ လာဇီယို ၊ ဆီနာ ၊ အိုစာစူနာ ”” တို့ နဲ့ အတူ အောင်မြင်မှုများ သိမ်းပိုက်နိုင်ကြပါစေ ။
မုန့်ပျားသလက် သည်က နာနဲ့ ပဏာမစားဘူး…။ ဒီတော့ လာပြီဂို နဲ့ ကျူဖင်တပ် ကိုင်လိုက်မယ် နောက်နှစ်သင်းလောက်က ဘာနဲ့တွဲရမလဲ
အိုစာစူနာ နဲ့ နာပိုလီ တွဲထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ ။
Rayo Vallecano,Levante ,Toulouse,Dijon 1x,ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလေးတွေပါ
ဟုတ်ကဲ့ နောင်လည်း ကိုဇာနည် ရဲ့ ရွေးခြယ်မှုလေးတွေ ကို သိပါရစေ ခင်ဗျာ ။
ချွန်းတော် အားပေးချင်တာက တော့… အင်း…
S ပန်ညို နဲ့ ဝက်စ်ဘရွန်း ပါခင်ည ..
လီဗန်တေးနဲ့ ဝက်စ်ဘရွန်း အဲ့ဒီ ၂ ပွဲ ဂိုးအများ ကြိုက်မိပါတယ်..
““ ဗီလာရီးရဲ ”” လေးပါ အားပေးကြည့်စေချင်ပါတယ် ။
တနင်္ဂနွေည သည် လှလှပပ အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ ။
ကွန်မင့်ချီးမြှင့်တော်မူကြသော ရွာသားများနှင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုကြပါသော စာဖတ်သူအပေါင်း ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ခညောင်းပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင် ထီပေါက်မောင်းပေါက် ဆော်ကြည် အားလုံးအိုခေကြပါစေ ။
သည်ပို့ စ်ပါ ကွန်မင့်များကို အနီလိုက်ပြထားသူများအတွက်မူ ““ olo ”” အဲဒါဘဲ ။
ညကတော့ လာဇီယို နဲ့ ဆီနာ မိုက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ အမြဲတမ်း ပရိတ်သိတ်ပါ။နှစ်ပွဲမှန်နေပြီး နောက်ပွဲတော့ မှန်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး အိုဆာဆူနာကို ပယ်လိုက်တာ
ဟုတ်ကဲ့ ၊ သည်ကနေ့ ည တော့ မသေချာသေးပေမယ့်
ကျွန်တော် လာခဲ့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ။